गरिव भुकम्प पिडितलाई टहराको वास, राज्यको आश – Gulmiews
गरिव भुकम्प पिडितलाई टहराको वास, राज्यको आश
April 5, 2016 Raju Gautam
गुल्मी , चैत्र–२२ । भुकम्पले घर भत्काई दिएर कतियप जनता टहराको वास बस्न थालेको एक वर्ष हुन थालि सक्यो । हुने खानेहरुले भुकम्पले भत्काएको घर बनाई पनि सके तर दिनभरी निमेक मजदुरी गर्ने र मुस्कीलले साँझ विहानको चुलो जलाउनेहरुको भने अहिले पनि वास खुल्ला टहरामा छ । यस्ता खाले भुकम्प पिडितहरुको प्रतिनिधी मुलक कथाका रुपमा गुल्मी बुढीझीर्मीका केशरबहादुर थापा परिवारको विचल्लीलाई लिन सकिन्छ ।
बुढीझीर्मी गाउँ साविकको दुविचौर गाविस वडा नम्वर १ को अधिकांस दलित गरिव वस्ने गाउँ भनेर चिनिन्छ । अहिले रेसुङ्गा नगरपालिका बने पछि त्यहाँका गरिवहरुलाई नगरपालिका बेकारको बोझ जस्तै बनेको छ । अनेक कुरामा कर, आफै दुख गरेर ल्याएको पानीमा शुल्क, अझ घर बनाउन समेत नक्सा पास जस्ता झण्झटले ति गरिव जनताहरुलाई नगरपालिका वोझ नहुने त कुरै भएन् ।
खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला घोषण भएको गुल्मीमा गाविसहरुको त कुरै नगरौं त्यस रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रैको वुढीझीर्मीमा कतिपयको शौचालय नै छ्र्र्र्रैन । त्यस माथी भएको सानो वास पनि बैशख १२ को भुकम्पले भत्काई दियो । यसबाट विशेष गरी बढि मात्रमा त्यहाँका गरिव दलितहरु मारमा परे भन्ने बुझाई धेरैमा छ । तर त्यस बुढीझीर्मीमा बस्ने केशरबहादुर थापा , जातले क्षेत्री भए पनि आर्थिक पछ्यौटेपनको दृष्टीले दलितका पनि दलित भएका छन् यति वेला ।
दुई महिना जती खान पुग्ने वारी भएका थापा भुकम्पले भत्काएको घर कसरी बनाउने चिन्ता भन्दा पनि दैनिक विहान वेलुकाको गुजरा कसरी चलाउने भन्ने पिरालोमा पर्दै आएका छन् । एक आँखाको ज्योति गुमाएका र घुँडाको समेत अपङ्गता भएका थापा छिमेकीले घर ठडाए पनि उनि राज्यले कहिले देला ऋण र बनाउनला भन्ने पर्खाईमा छन् । छोरा नभएका थापाको दुई छोरीहरुको विवाह भए पनि एक छोरीको पठन पाठन चलिरहेको छ ।
‘उपाय नलागे पछि के गर्ने ? अरुले घर ठडाए भनेर डाह गर्ने कुरा भएन सरकारले घर बनाउन पैसा दिन्छ रे भन्ने सुनेकोले त्यही कुरेर बसेको छु’– थापाले भने –‘सरकारले दिएन भने यहि टहरामा विताउने हो ।’ घरमा कमाई दिने कोही छैन् । श्रीमति र छोरीको मेलापातबाट सामन्य गुजारा गरेका थापाले २०४५ सालतिर बनाएको घर भुकम्पले भत्काई दिए पछि त्यसैको थोत्रा टिन झिकेर खुल्ला टहरो बनाएका छन् ।
त्यही टहरामा चुलो, त्यसैमा विस्तरा र राखन धरान, गर्ने गरेका थापा परिवारलाई समस्य यसैमा छ कि ताला चाँवी नभएको टहरोमा कुकुर पस्छ कि भन्ने डरले एक जनाले दिनमा कुर्नै पर्छ । हालै मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेल सहित दर्जनौ कर्मचारीहरुको लावालस्कर उनको त्यही टहरोमा पुग्यो । उनि सहित त्यहाँका दुई जना भुकम्प पिडित निकै ठुलो अपेक्षित मुद्रामा देखिन्थे । यता प्रजिअ कंडेल पनि दयालु मुद्रामा थिए ।
तर उनले के गरुन ? राज्यले जति पठाएको छ त्यती राहत रकम दश हजार बाँडेर फर्किए । उहिरुको अलि बढी अपेक्षित मुद्रालाई मध्य नजर गर्दै उनले हिड्ने बेलामा भने–‘ सरकारले अव घर बनाउने अनुदान छिट्टै वितरण ग¥यो भने त्यो लिएर आउने छौं ।’ त्यो दश हजार प्ुष, माघको जाडो महिनामा राज्यले वितरण गर्ने घोषणा गरेको न्यानो कपडा वापतको रहेछ तर वितरण भयो गर्मीले हप्हपी पार्ने चैत्र महिनामा । र पनि उनि दश हजारका नोटहरु गन्दा निकै खुशी देखिन्थे । उनी संग त्यो राहत रकम पाएका छिमेकी दलबहादुर थापाको अवस्था पनि करिव उस्तै रहेछ ।
उनकी श्रीमति रुपा थापा भन्दै थिईन् –‘छोरा नपाएर होईन तर पाएर पनि पाए जस्तो भएन् । उनको छोराहरु प्रति दुखेसो थियो भारतमा रहेर पनि घर ठडाउन सहयोग गर्न सकेनन् । घर बनाउन जग खनेको महिनौं भई सकेको रहेछ तर रकम अभावमा खाडल मात्रै खनेर बसेका छन् । बृद्ध थापाले भने–‘ के गर्ने उपाय नलागे पछि जगका लागि खनेको खाडल पनि पुरिन थाल्यो , छोराहरुको पनि बाटो हेर्न मात्रै भयो , अव त सरकारले दियो भने मात्रै बनाउने हो नत्र यहि थोत्रो गोठको वास हुन्छ ।’
तर उनका छिमेकी रिखबहादुर थापाले भने कच्ची घर भुकम्पले भत्काई दिए पनि १२ लाख भन्दा बढि खर्च गरेर पक्की घर बनाई सकेका रहेछन् । उनले भन्दै थिए –‘ऋण–धन गरेर बनाएको हो सरकारले सवैलाई सहयोग गर्दा मलाई पनि गर्ला कि भन्ने आशामा छु । ’
उनको त्यो भनाईले पनि प्रष्ट हुन्छ कि राज्यबाट पाउने भनिएको राहत रकमको आशामा धनी गरिव सवै छन् तर प्राथामिकता पहिला कसलाई कति दिने ? भन्ने विषयमा यि तिन अलग अलग आर्थिक हैसियतका प्रतिनिधी पात्रहरुको अवस्थाबाट राज्यले निर्णय लिने कि ?
हेरौ तिनै तिन पात्रको फोटो फिचर